How'd it happen and more reports?: သစ်သီး လုံးဝ မစားသင့်သောအချိန်
How'd it happen and more reports?
A GLOBAL MAP OF 2018 TERRORISTATTACKS ~ 470 ATTACKS & 2,482 FATALITIES!
TIGI & DAVINES!
My Life Choice!
မြေယာဥဒေ( Land Law)
မြေယာဥဒေ( Land Law) ဂရန်မြေြေ မငှားစာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သော မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မြေငှားစာချုပ်ပြုလုပ်၍ အသိအမှတ် ပြုထ...
ပျားရည်၏ ကောင်းကျိုးများ ပျားရည်မှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးအချက်အလက်တွေ မြောက်များစွာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် တို့ လေ့လာကြည့်ရအောင် ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ DBS Bank နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဧရာဝတီဘဏ်(AYA Bank )တို့ Internet ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မူ လုပ်ငန်း
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သော DBS Bank နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မှ ဧရာဝတီဘဏ်(AYA Bank )တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ Internet မှ တဆင့် ငွေလွှဲဝ...
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ SME အထူးချေးငွေ ထုတ်ချေးမည့်အစီအစဉ်
SME ချေးငွေများ ရန်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသာ ချေးပေးလိုဟု ဆို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း ၅,၀၀၀ အထိရမည့် SME ချေးငွေ များကို နယ်လုပ်ငန်းရှင်မ...
မာ၊ ကြီး၊ ရှည် ဖြစ်ချင်တဲ့ ယောင်္ကျားများ သတိထား
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ ... Penis enlargement (1) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း ယောက်ျား တစ်ယောက် လိင်တံဟာ လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွ...
တခါလေတော့ အပြင်းပြေ ရယ်စရာလေးတွေပါ...
ယောကျာ်းဆိုတာ... ကိုကိုတို့ဒီလိုဘဲလား! .. မိန်းမမာယာ သဲခိုးပြာ....
အကယ်၍ သင်ဟာ အမိမြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ရင် သိထားသင့်တဲ့ မြန်မာ့ အခွန်အကြောင်းတွေပါ.... အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်သင်တို့ နားရှုပ်နေပါအုံ...
Hollywood မှာ ပထမဆုံး မြန်မာဆန်ဆန် ရိုက်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာမင်းသမီး ဝင်းမင်းသန်း၊
Hollywood မှာ ပထမဆုံး မြန်မြန်ဆန် ဆန် ရိုက်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာမင်းသမီး ဝင်းမင်းသန်း အခုခေတ်မိန်ခလေးတွေ အတုယူသင့်ပါတယ် လို့ထင်ပါတယ်.......
သစ်သီး လုံးဝ မစားသင့်သောအချိန်
1-07-2014 နေ့ ထုတ် ဒို့ ကျေးရွာ ဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ယခု လို ရွေးချယ်ေ ဖ်ါပြပေး ပါသော ဒို့ ကျေးရွာဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ ဝင်များနှ င့် ကျေးဇူး တင်ထိုက်သူများ (အားလုံး)ကိုကျေး ဇူးတင် ပါ တယ်ရှင်။ FB မှ စာဖတ် ချစ်မိတ်ဆွေ များ သုတရစေ လိုသော စိတ်စေတနာဖြင့် မျှဝေ လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ (ဆောင်းပါးရှင်...ပေါက်ပေါက်.. .မျှဝေသည်)
“ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာအစာမျှမရှိတဲ့အချိန်မှသာ သစ်သီးတွေကိုစားသင့်ပြီး၊ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းမှာေ တာ့ သစ်သီး(လုံးဝ)မစားသင့်” ကြောင်း အင်တာနက်သတင်းလွှာဖြစ်တဲ့ American Daily Health Tips မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့ က အောက်ပါ အတိုင်း အကျယ်တ ၀င့်ေ ဖ်ာပြသွားခဲ့ပါတယ်။
“ဖရဲသီးစားပြီးတိုင်း လေချဉ်တက်တယ်” “ပန်းသီးစားတဲ့အခါတိုင်း လေပွလာတယ်” “ဌက်ပျော သီး စားပြီးတာနဲ့ ဗိုက်နာသလိုလို ဖြစ်လို့ သန့် စင်ခန်းဝင်ရတယ်” စသည်ဖြင့် အချို့ က သစ်သီးနဲ့ပတ်သက်လို့ စောဒကတက်ကြပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေနဲ့ ပတ် သက်လို့ သစ်သီးများဆိုင်ရာ ခန္ဓာဗေ ဒသုတေသီ တစ်ဦးဖြစ်သူ အမေရိကန်လူမျိုး ဒေါက်တာ Herbert Shelton က “ တကယ် တော့ ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန် (အစာအိမ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်) သစ်သီးတမျိုးတည်းစားရင် အဲဒီလို ကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုး တွေ မဖြစ်စေပါဘူး။ ထမင်းစားပြီးခါစ ချက်ချင်းဆိုသလို အသီးတွေတန်းစား မိတဲ့အခါ(ဒါမှမဟုတ်)သစ်သီးကို တခြားအစားအစာ တွေနဲ့ တွဲစားတဲ့အခါမှသာဖြစ်တာပါ။ သစ်သီးနဲ့အဲဒီအစားအစာတို့ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပြုပြီးတော့ ဂက်စ်ထွက်လာပြီး၊ အချဉ်ဖေါက် လာတာ မျိုးပေါ့ ” လို့ဆိုပါတယ်။
ဆက်လက်၍ “ဥပမာပေါ့ဗျာ … ခင်ဗျားတို့ ..ပေါင်မုန့် ၂-ချပ်ကို ပန်းသီး ၁-စိပ်နဲ့ တူတူစားမိတယ် ဆိုပါ
စို့၊ အစာအိမ်ထဲရောက် လို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘဲ အစာချေရည်တွေက သစ်သီးေ တွ၊
ပေါင်မုန့် တွေနဲ့ ဓာတ်ပြုပြီးတော့ အက်ဆစ်အချဉ်ပေါက် လာပါတယ်။ တချိန်းတည်မှာဘဲ အစာတွေပုပ်သိုးဆွေးမြေ့ သွားတော့တာပါဘဲ၊ အကယ်၍ ပေါင်မုန် နဲ့ တခြားအစာတွေမပါဘဲ သစ်သီးတမျိုးတည်း သူ့ ချည်းဘဲစားရင်တော့ အစာအိမ်၊ အူတွေထဲ ပုံမှန်အတိုင်းတောက်ေ လျှာက်ေ ရာက်သွားပြီး အစာကျေ ညက်ဖို့ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်စေနိုင်ဘူးလေ ” လို့ဒေါက်တာ က ပြောပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ထားတဲ့ သံဗူး/ပုလင်း(ဖျော်ရည်-သစ်သီးဗူး)တွေမှာ သစ်သီးတွေကို အပူပေးပြုပြင် ထားတာမို့ ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ ပျောက်ဆုံး ကုန်ပြါ ပီတဲ့။ အကယ်၍ ထိုသစ်သီးဖျော်ရည်ဗူးကို မဖြစ်မနေသောက် ရတဲ့အခါမှာ ချက်ချင်းမြိုမချ ဘဲ ခေ တ္တငုံထာားပြီးမှသာ မျိုချသင့်ကြောင်း၊ အဲဒီလိုပြုခြင်းက အချိုရည်နဲ့ ခံတွင်းထဲက တံတွေး တို့ ပေါင်း စပ်မိပြီး အချိုရည်ထဲမှာပါတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ တွေ ပျက်ပြယ်သွားကာ အစာအိမ် ကိုဘေးဥပါသ် မဖြစ် စေတော့ပါဘူးတဲ့။
လတ်ဆတ်တဲ့ အော်ဂဲနစ်သစ်သီးဝလံတွေဟာ အဆိပ်အတောက်ပြေစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အေ လးချိန် ကျစေခြင်း၊ သက်ရှည်ကျမ္မာ စေခြင်း၊ ကျန်းမာစွာဘ၀နေထိုင်မှုကိုပံ့ပိုးခြင်း စတဲ့အကျိုးေ ကျးဇူးများ ရရှိစေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဗိုက်ဆာ(အစာအိမ် ဟောင်းလောင်း ဖြစ်) နေတဲ့အချိန် သစ် သီးတွေစားခြင်းက ဆံပင်မဖြူစေကြောင်း၊ ဦးခေါင်းထိပ်မပြောင်စေကြောင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်း ချုပ်ပေးနိုင် ကြောင်း၊ မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို သက်သာစေကြောင်း ဒေါက်တာ Shelton က ဆို ထားပြန်ပါတယ်။
သစ်သီးဝလံတွေ အစားသင့်ဆုံးအချိန်များကတော့ (က)နံက်အိပ်ယာထ ရေသောက်ပြီးတဲ့အချိန် (ခ) ထမင်းမစားခင် ၁-နာရီ ခန့် အလို (ဂ) ထမင်းစားပြီးနောက် ၂-နာရီအကြာ …စတဲ့ အချိန်ေ တွဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်၍ ဒေါက်တာက သစ်သီးတမျိုးစီနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်ပါအတိုင်း ထပ်လောင်းအကြံပြုသွားခဲ့ပါတယ်။
(ကီဝီသီး) ပိုတက်စီယမ်၊ မဂနီစီယမ်၊ ဗီတာမင်အီး၊ အမျှင်ဓာတ်တို့ ပါရှိလို့ကျန်းမာရေးကိုဘက် စုံကောင်းစေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကီဝီသီးထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီက လိမ္မော်သီးထက် ၂-ဆပိုပါတယ်။
(ပန်းသီး) ပန်းသီးထဲမှာ ဗီတာမင်စီ ပါဝင်မှုမများပေမယ့်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ် ဓာတ်တိုး ဆန့် ကျင်ပစ္စည်းများနဲ့ဖလေဗို နွိုက်ဓာတ်ပေါင်းစုတို့ ပါရှိလို့အူမကြီးကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ နဲ့လေဖြတ်ခြင်း စသည့်ရောဂါများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ အလားအလာကို လျော့ပါးသက် သာစေပါ တယ်။
(စတော်ဘယ်ရီ) ဓာတ်တိုးဆန့် ကျင်ပစ္စည်းမြင့်မားတဲ့ အသီးဖြစ်၍၊ ကင်ဆာရောဂါများကို ကာကွ ယ်ပေးပါတယ်။ မလိုလားအပ် တဲ့ free radicals များကိုတိုက်ထုတ်ပေြး ပီး သွေးကြောများပိတ် ဆို့ ခြင်းမဖြစ်စေတော့ပါဘူး။
(လိမ္မော်သီး) တနေ့ ကို လိမ္မော်သီး ၃-လုံး ပုံမှန်စားပေးခြင်းဖြင့် အအေးမိခြင်း(လုံးဝ)မဖြစ်စေ နိုင်ပါဘူး။ လိမ္မော်သီးမှာ အက်ဆစ် ဓာတ်ကြွယ်ဝပေမယ့် ခန္ဒာကိုယ်အတွက် အယ်လ်ကာလီမျှ တစေတာကြောင့် ကိုလက်စထရောကျစေခြင်း၊ ဆီးကျောက်ကျေ စေခြင်း၊ အူမကြီးကင် ဆာဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာကို လျော့ချပေးခြင်း စတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေးပါတယ်။
(ဖရဲသီး) ဖရဲသီးမှာ ခွန်အားပြည့် glutathione ဓာတ်တွေ အမြောက်အများပါရှိတဲ့အပြင်၊ ကင် ဆာ များကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ lycopene ဓာတ်ရရှိရာ အရင်းအမြစ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ရေ ဓာတ် ၉၂ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတာကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးတက်မြင့်မားစေပါတယ်။
(မာလကာသီး နဲ့ သင်္ဘောသီး) ထိုအသီး ၂-မျိုးစလုံးမှာ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝစွာပါရှိပါတယ်။ မာလ ကာသီးမှာ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါရှိလို့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သင်္ဘောသီးထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ကယ်ရိုတင်းဓာတ်က မျက်လုံးအားကောင်းစေ ပါတယ်။
(မှီငြမ်း American Daily Health Tips on 19th Oct ’13)
Credit @ Ko Nge
Posted by Ko Nge at Thursday, July 24, 2014
*** လာလည်သောအပေါင်းအသင်းများ မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကနေ သင်တို့အလိုရှိသောပစ္စည်းများကို ရှာဖွေပြီး ORDER မှာလို့ရနေပါပြီ ***
ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!
SEARCH HOT USUNUAL NEWS!
SEARCH FOR THIS SITE!
MMWeather Information BLOG
Let's Save Myanmar Now!
TODAY'S TOP HITS!
MYANMAR CENTRAL BANK!
Date : 30th Jan 2018
1330.0 / USD
Source : forex.cbm.gov.mm
ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၁၀%
အပ်ငွေပေါ် အနည်းဆုံး အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၈%
ချေးငွေပေါ် အများဆုံး အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၁၃%
GDP Growth 5.90 %
Annual Rate of Inflation 4.79 %
Year on Year Inflation 4.47 %
Interbank Market Rates
LISTEN JANGO RADIO!
Get the Listen Jango Music Radio widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeingawidget? (More info)
MYANAMR MARKET PRICE!
Market Price! (Myanmar)
Central Of Myanmar Refernce Exchange Rate!
MY OTHER WEBSITES!
(1)Did You Know! (2)Look Attentive Moive! (3)When'd it happen? (4)How it happen and more reports! (5) Savemyanmar Flood Disater Victims!
MOST USEFUL WEB TOOLS!
Send SMS Unlimited Worldwide! English- Myanmar Dictionary! Myanmar=English Dictionary! English- Myanmar Translator! Myanmar Font Convertor! Myanmarwords! Myanmar 100 Years Calender! Website speed test!
IT CERTIFICATION WEBSITES!
Pass-Guaranteed uCertify Transcender Transognal
ONLINE FREE WATCH MOIVES!
Free watch32 Moive! aznvtv maaaduu stagevu moivedee 77VCD 8442 funshion youku pps.tv pptv letv todou 33md
FREE SOFTWARE DOWNLOAD!
Winkeyfinder Downloader! Linus OS Myanmar Version! free oldversion!
MYANMAR PROPETY MARKET!
Myanmar housing! Myanmar house!
MYANMAR COMMERCE WEBS!
Myanmar Laws! Myanmar Daft Law Myanmar Gold and Silver Prices Today myanmarcarsmarket Myanmarmotor Myanmar commodity prices myanmartradenet Myanmarbulletin Bard myanmartradenet Commerce Commercejournal
FOREIGNER JOBS IN SINGAPORE!
foreigners jobs in Singapore - Careerjet
Presentation & Visual Designer
Latest Gumtree ads. Location: Singapore. Category: Jobs. Keyword: foreigners.
EPS Computer Systems - Your Trusted Recruitment Partner
Jobrapido | Jobs, Foreigner career
Jobs In Singapore For Foreigners Jobs Singapore
JobGuru.com : Nobody Talks About Your Career The Way We Do!
​မော်တော်ယာဉ်အခွန် စည်းကြပ်မှုဆိုင်ရာ နှုန်းထားများ
အမေရိကန်ရောက် အမှန်တွေပြောနေတတ်တဲ့ ဇာဂနာ
ဒေါက်တာ လွင်သန့် (ဆေး-၂)
ရွာသာကြီး ကုန်းတွင်းကုန်သေတ္တာစခန်းအနီး မြေကွက်တွေ ...
ရန်ကုန်မြို့၏ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းနှင့် အငှားဈေးကွက်...
အကောက်ခွန်က ကားတင်သွင်းမှုဒဏ်ကြေး ပြောင်းလဲ၊ ပါမစ်ပ...
ဂဏန်းကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ နှင့် အရမ်းစပ်တဲ့ ငါးပိထောင်း...
Common Oral Mucosal Lesions ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်...
Cancer Symptoms for Men ယောက်ျား-ကင်ဆာ လက္ခဏာများ
ကြိုတင်နံပါတ် 9H/9999 ကို စံချိန်တင်နှုန်း ကျပ်သိန်...
Brand New ကားအရောင်းပြခန်းများကို အစီး ၃၀၀ ကျော်အထ...
ဇုန်ကား စတင်အပ်နှံခွင့်ပြုသောနေ့တွင် ကားစလစ်ဈေးြ...
စားသောက်ပွဲတွေက ဇွန်းနဲ.ခက်ရင်းသင်္ကေတများများရဲ့ လျ...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိမော်တော်ကားတင်သွင်းမှု အခြေအ...
အဝတ်လျှော်ပြီ မီးပူပါ တစ်ခါတည်း တိုက်ပေးတဲ့ စက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠ...
စတော့ဈေးကွက်က ဘဏ်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသလား
Singapore & Malaysia (MUSIC VIDEO) - Fung Bros!
ယောက်ကျားလေးများအတွက် ( သီးသန့်) ဗေဒင် (ဘယ်လိုအမျိ...
(၁)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ၀ိသေသလက္ခဏာများ
(၂)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ၀ိသေသလက္ခဏာများ
(၆)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများ
(၀) ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာမျာ...
( ၃) ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာမျာ...
(၄)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ
(၅)ကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားများ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ
၂၀၁၄-ခုနှစ် - အားလုံးအတွက် ဂဏန်းဗေဒင် ကံကြမ္မာဟောကိ...
အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ဘယ်လောက်များ ရိုးသားကြပါသလဲ?
ရင်သားကင်ဆာ လွယ်ကူစွာ ကာကွယ်ပါ
ရန်ကုန်မြို့စွန်က မြေကွက်များ ၀ယ်ယူလိုသူများ ရှိနေ...
ဆင်းရဲတဲ့ စကာင်္ပူတွေ ပိုဆင်းရဲလာပါတယ်တဲ့ !
သင့်မှာ ဘ၀အာမခံစနစ်လေးတွေမရှိရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်သ...
Condom Standards စိတ်ချရတဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာ
Buyadiscount maid at Singapore's malls!
ချဉ်စပ်အိမွှေး ဝက်ခြေထောက် ရခိုင်ချက်လေး
ပြင်ဦးလွင်ကို ဒုက္ခပေးလာမည့် ယူကလစ်တော
သတိထားစရာ မှဲ့ကင်ဆာ Melanoma
Apple (1) MAC (3) Websites (1) ကား (23) ကုန်သွယ်ရေးသတင်း (32) ကျန်းမာရေး (343) ခရီးသွား (9) ချစ်မှုရေးရာ (41) စကာင်္ပူသတင်း (3) စက်မှုဇုန် (6) စစ်ရေး (5) စြေးကှကျ (2) စွမ်းအင် (3) စီးပွားရေး (553) စီးပှားရေး (1) တရားတော်များ (3) ထူးဆန်းအံ့ဘွယ်များ (27) ဓာတ်ပုံပညာ (4) နည်းပညာ (263) နညျးပညာ (1) ပညာရေး (88) ပန်းချီ (2) ဖုန်း ဆော့ဝဲလ် (5) ဗဟုသုတ (13) ဗီဒီယို (42) ဘာသာရေး (16) မီဒီယာ (90) မူခင်း (45) ဖြစ်ရပ်မှန် (34) ရယ်စရာများ (6) လူထုအော်သံ (46) လူမှုရေး (106) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (58) သမိုင်း (3) သီချင်းများ (61) ဟာသ (7) အချက်အပြုတ် (51) အထူးသတင်း (293) အလှအပ (16) အလုပ်အကိုင် (88) အားကစား (3) အိမ်ခြံမြေ (131) အတွေးအခေါ် (14) အရောင်းအ၀ယ် (9) ဥပဒေ (55) ကျောက်မျက်ရတနာ (11) ကျော်ငြာများ (14) ငွေကြေး (255) ဈေးကွက် (17) ဆောင်းပါး (80) ဗေဒင် (10) ရှေးဟောင်း (3) လောကနီတီ (1) နိုင်ငံခြား (95) နိုင်ငံရေး (163)
Latest Activity on Myanmar Network
URC postedablog post
HTML Tutorial - Table of contents - HTML.net
JOBS IN MYANMAR!
Jod in Myanmar
MY BLOG'S TOUR'S
Myanmar in Singapore
Myanmar MP3 / Myanmar VCD / MTV / Entertainment - Movies and Celebrities Photos and more - Myitzuri.com
Myanmar Times Weekly Business Journal - mmtimes.com
Myanmar Youth Media Club - mymclub.net
Open Engineer For Myanmar
Popular Myanmar Journal : PopularMyanmar.com
Studying Of My native Town (Namhsan)
Thanyawzin.com - Myanmar Online Friends Community, Friendster MySpace like Social Networking
www.myanmarmysteriestour.co.cc - Click - Search Myanmar
မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ
အဖြူရောင်သံစဉ် - Myanmar Entertainment For Myanmar Community
American Dollar to Myanmar Kyat
About the List of Attacks!
Suicide Blasts 5
Suicide Blasts 22
2001 (Post 9/11)
Put the Numbers
...killed twice as many people in one month (5000) in November, 2014) than were killed in in 350 years of Inquisition (2000-3000).
...murder more people everyday than the KKK has in the last 70 years (26 since 1945).
...killed more civilians in two hours on September 11th (2977) than in the 26 years of sectarian conflict in Northern Ireland (2236).
...massacred more Iraqis onasingle day in June, 2014 (1566) than the number of criminals executed by America in the last 40 years (1423).
...killed more Americans on American soil than the combined militaries of Japan and Nazi Germany in WWII.
...slaughter almost twice as many people everyday than were killed during the entire Salem Witch Trials (20).
BED HEAD MYANMAR!
BEAD HEAD Myanmar
DAVINES WORLD WIDE HAIR TOUR 2012
ASN SHOP AND SAVE!
MY WEB WORTH!
My blog has been valued at... $230.48
SUPPORT BY DONATE!
Small $5 SGD Medium $10 SGD Large $25 SGD
WHO'D BE VISIT MY BLOG'S!
How'd it happen and more reports!
MYANMAR MARKET !
Open Capital Markets in Myanmar!
Myanmar Focused Equities Index
Yoma Strategic 0.71 +0.01 +1.43%
Interra Resource 0.215 +0.01 +4.88%
Myanmar Inv Int 1.135 0.00 +0.00%
$ We 0.011 -0.001 -8.33%
Super Group 1.145 -0.03 -2.55%
$ Ntegrator Intl 0.03 0.00 +0.00%
Upp 0.245 0.00 +0.00%
Kreuz 0.80 0.00 +0.00%
Gunkul Engineer-f 0.48 +0.181 +37.71%
Usd/mmk 1038.00 N/A N/A
Myanmar font conventer!